Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Thailand War Deg Deg Ah » Madaxweynaha Skål Asia: La kulan musharax Andrew J. Wood
Wararka Ururada • Jebinta Wararka Caalamka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • News • Thailand War Deg Deg Ah • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Sirta Safarka • Wararka kala duwan
Madaxweyne kuxigeenka Skål Asia Andrew J. Wood ayaa maanta ku dhawaaqay inuu u tartamayo doorashada Madaxweynaha ee 2021-2023 Skål Asia doorashooyinka oo dhacaya inta badan bisha Ogosto 25, 2021.
Wadahadal lala yeeshay Musharraxa Madaxweynaha Skål Asia Andrew J. Wood iyo Dr. Scott Michael Smith, Isuduwaha Koorsada ee Jaamacadda Assumption oo ka socda Waaxda Soo-dhawaynta iyo Maareynta Dalxiiska.
Magacaabista Wood ee madaxa Sk topl Asia shaqadiisa ugu sareysa lama yaab ku noqon dad badan.
Wuxuu ahaa xubintii ugu waqtiga dheerayd gudiga Aasiya waana kan ugu sareeya sadexda gudoomiye kuxigeen ee guddiga.
Wood wuxuu markii ugu horeysay ka mid noqday guddiga Skål Asian Area (SAA) 16 sano ka hor isagoo ahaa Director of Development 2005-2009 wuxuuna labo jeer qabtay xafiiska VP, ugu horeyntii intii u dhaxeysay 2009-2010 iyo kii ugu dambeeyay tan iyo 2017 ilaa maanta.
Wood waa madaxweynihii hore ee Hogaanka Qaranka Thailand 2012-14 hadana waa Madaxweynaha Naadiga Skål Bangkok, xil uu markii ugu horaysay qabtay 2008-10 iyo markale 2018-present.
Sannadkii 2010 Wood wuxuu ku biiray Golaha Sare ee Skål International isagoo Agaasime ka ah. Isagu waa xubin si fiican loo ixtiraamo oo loo qurxiyo Skål, Wood wuxuu leeyahay 29 sano oo adeeg heer sare ah. Su'aal kama taagna in Wood uusan laheyn kaliya khibrada iyo xirfadaha uu ku hogaamin karo Skål Asia laakiin uu miiska u soo saaray rikoor adeeg oo cajiib ah Caalamiga ah ee Skål, hoyan sanado badan.
Aqoonta iyo xiriirada Wood - labadaba gudaha Skål laakiin si isku mid ah ayey muhiim ugu yihiin marxaladda caalamiga ah ee socdaalka iyo dalxiiska - waxay ka dhigeysaa inuu yahay musharax ku habboon. Muwaadin u dhashay UK, oo xirfad xirfad leh ku leh martigelinta Thailand, guriga la korsaday Wood 30-kii sano ee la soo dhaafay, wuxuu arkay maareeyaha guud ee khibradda leh inuu maamulo qaar ka mid ah hudheelada ugu wanaagsan dalka, iyo meelaha loo dalxiis tago, oo ay ku jiraan kuwa caanka ah ee Royal Cliff Group of Hotels. Royal Cliff Resort waxay ahayd goobta martigelinta ee shirkii aadka loogu guuleystay ee 2006 Skål World.
Sanadkii 2019 waxaa la gudoonsiiyey Skål's Membre D'Honneur waana qaataha 'Skål Order of Merit', oo uu gudoonsiiyey Madaxweyne Mok Singh sanadkii 2013 waana qaataha Abaalmarinta Madaxweynaha Skål, ee uu gudoonsiiyey Madaxweyne Peter Morrison sanadka 2020.